किन दौडी रहेछौ ब्यर्थैमा
तिम्रो पेट भरिए पछी पनि शायद अरु सामल जम्मा गर्नु छ होला ।
राम्रै गुजारा हुँदा हुँदै पनि अग्लो तला चाहियको छ शायद तिमीलाई ।
चिन्ता तिमीलाई तिम्रै घरको मात्रै छ अरु जाउन सब भांडमा ।
बिपरित बिचार त बैरी नै ठान्छौ के तिम्रै बिचार सब ठीक हो त ?
तिम्रो गाडीका टायर बदल्न बिती सक्यो -नया घरको जग बसाउन बालुआ गिटी खसाउन बिती सक्यो । नेतालाई भन्सुन गरी छोरो अमेरिका युरोप पठाउन बिती सक्यो ।
पार्टिमा ध्यान नदिय पोस्ट धरापमा पर्ने डर पनि उत्तिकै छ तिमीलाई ।
आखिर मानवताको रुप पनि बिर्सेंउ तिमी धनको लालचमा ? तिमी धनी हुँदा
देश कता तिर जादै छ के थाहा छ तिमी लाई ? बिना शुत्रको राज्य हाँक्न
खोज्ने तिमी अब बल्ल चाल् पायौ आफ्नै घर भात्केको ? धेरै धन कमायर
मोज गर्छु भन्ने शोच हो तिम्रो आखिर तिम्रै छोरी बुहारी अपहरित हुन पुगे
कुनै जवाफ छ तिम्रो ? जुन बेला पनि ईर्स्यामा दिन गयको छ तिम्रो ।
अनुशासन को पाठ पढाउन छोडेका छेनौ अरुहरु लाई । आखिर तिमी
शान्ती को अनुभुती गरेकै छौ तैपनी । गिन्तिमा ९९ आँफै हुन खोज्छौ
अन्त्यमा आँफैलाई गिन्ती गर्न भुलेउ १०० पुग्न १ कम भयो ।मिठो त खुब चाहिने तिम्रो जिब्रो लाई तर सादा पानी उमाल्ने ढंग छैन तिम्रै । आखिर कसरी चलाऊछौ त तिम्रो यो घर ? घरमा धैंसो उत्पादन गर्ने आईडिया छैन काजल को उद्योग खोल्ने तिमी कती दक्क्ष छौ आफ्नो देशमा ? बरु दुनियाँ लाई केही दिन सिक । आखिर तिमी एक्लई आयका हौ र जादा पनि एक्लई हो । किन दौडी रहेछौ ब्यर्थैमा ?
Happy Tihar to " DAUTARI"family .